Ita Kuti Kubudirira Kwako Kubudirire Kuzadzisa Zvinangwa Zvako
Iye zvino kuti iwe unokwanisa kubudirira, pane imwe pfungwa inokosha inokosha: kukurumidza kushanda kwako.
Nechinangwa chei? Wedzerai mikana yekubudirira kwemabasa enyu.
Sezvo isu tose tichiziva, kuzadzisa zvinangwa zvako hazvisi basa rakanyanya uye nekuti tinoda mazano anobatsira kuti tinyatsonzwisisa.
Kufambisa chikwata chako chekubudirira iyi danho risingafaniri kuregererwa! Zvechokwadi haisi nguva dzose iri nyore, ivo zvinhu zviduku zvinowedzera uye zvinopedzisira kuva nemigumisiro pamaitiro ako uye zvinangwa zvako. Hapana anodikanwa kuti asvibiswe. Tarisa iyi vhidhiyo pfupi ye3 min uye uwane mazano achaita kuti kubudirira kwako kuve nyore!
Muvhidhiyo iyi uchawana pfungwa uye mazano achakubvumira kuti uwedzere kukurumidza kwekubudirira kwako kusvika kune zvinangwa zvako ..., uye zvose izvo, mune zvishoma 5:
1) Kujekaé : Kujekesa zvinangwa zvako zvakakosha, ndicho chikonzero.
2) Kuzvipira : mazuva anongova maawa 24 chete, inguva yekutanga!
3) Zvakatipoteredza : Kuumba musangano ane hanya kunobatsira pakubudirira.
4) Flexibility : kubvuma kutsoropodza kuti zvibudirire, zvinogona kukubatsira kuti udzoke munzira yakarurama.
5) Ukama hwemuviri / hwepfungwa : inonyatsozivikanwa pfungwa nemuviri zvakabatanidzwa, zororo rekugadzikana riripo!
Nezvipfungwa izvi zviri nyore kuisa panzvimbo, iwe uchava
makadhi ose ari mumaoko ako, usazvirega usvibise uye enda munzira yekubudirira!
Kurumidza kuwedzera mararamiro ako ekubudirira kusvika zviri nani kusvika pane zvinangwa zvako. May 12th, 2018Tranquillus
pashureExcel Mazano Okutanga Chikamu-Kukonzera Kubudirira Kwako
zvinoteveraDzidza Zvimwe Zvichimbidzika uye Zviri nani Kuchengeta Musoro-Buda Pakupedzisira Kwekufa Kwebasa Rakaoma
Kuwedzera Kutya Kwemwe-Kutya Sechiito Chiratidzo